कालीगण्डकीमा डुबेर १९ वर्षीय शंकर पौडेल युवक बेपत्ता – Sandesh Press
कालीगण्डकीमा डुबेर १९ वर्षीय शंकर पौडेल युवक बेपत्ता
October 31, 2021 149
कालीगण्डकी नदीमा डुबेर एक युवक बेपत्ता भएका छन् । आइतबार दिउँसो चन्द्रकोट गाउँपालिका ८ का १९ वर्षीय शंकर पौडेल कालीगण्डकीमा डु’बे’र बे’प’त्ता भएका हुन् ।
उनी चन्द्रकोट गाउँपालिका-७ का ७६ वर्षीय थनेश्वर न्यौपानेको मृत्यु भएपछि दाहसंस्कारको लागि सत्यवती गाउँपालिका-१ रुद्रवेनीघाटमा गएका थिए । उनीसहित केही युवक घाटमाथि नुहाउन पुगेका थिए । सोहीक्रममा पौडेल डु’बे’र बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ ।
गहिरो दहमा डु’बे’को आशंकामा प्रहरी र स्थानीयले खोजी गरे पनि समस्या भइरहेको भट्टराईले बताए । मलामी गएको छोरा खोलामा बेपत्ता भएपछि परिवार शोकमा डुबेका छन् । स्थानीयले गोताखोर मगाएर भएपनि खोजी गर्न माग गरेका छन् । फोटो फाईलकालीगण्डकी नदीमा डुबेर एक युवक बेपत्ता भएका छन् । आइतबार दिउँसो चन्द्रकोट गाउँपालिका ८ का १९ वर्षीय शंकर पौडेल कालीगण्डकीमा डु’बे’र बे’प’त्ता भएका हुन् ।
गहिरो दहमा डु’बे’को आशंकामा प्रहरी र स्थानीयले खोजी गरे पनि समस्या भइरहेको भट्टराईले बताए । मलामी गएको छोरा खोलामा बेपत्ता भएपछि परिवार शोकमा डुबेका छन् । स्थानीयले गोताखोर मगाएर भएपनि खोजी गर्न माग गरेका छन् । फोटो फाईल
Prevनेपालमा आएर केहिदिन बिताएका अनुपम खेरले किन नेपालको बारेमा यस्तो लेखे ?
Nextरिट दर्ता गर्न सर्वोच्च पुगेका झन्डै ४० वकिलहरुलाई प्रहरीले लखेटेर माइतीघर पुर्‍यायो
कुरा नबिग्रियोस भनेर हामीले २ जनालाई मिलाउने प्रयास मात्र गरका हौ : गायक दुर्गेश थापा
पतिलाई आफु भन्दा धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ ? यी ५ गल्ती नगर्नुहोस्, बिग्रिनसक्छ सम्बन्ध
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, साल चैत्र १९ गते शनिबार, तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल